Ihe kacha mma Smartphone maka Bike GD134C
Elu-mbadamba Tablerest Mount YB03
Top-ere Ipad Headrest Mount YH02
Kemeghi Multi-n'akuku Laptọọpụ Guda Comp Kwekọrọ n'Ozizi na MacBook Pro / Air, Apple laptọọpụ, 11-15.6 "Akwụkwọ ịde ihe na Tablet Desktop Space-Saving Holder na Anti-Ileghara Silicone Kedo akwa GL054A
Azolitere Silicone mgbochi iwepụ Silicone.
18 ogo Laptọọpụ na-ele elevation na-akwalite ọkwụrụ ma na-ebelata nsogbu na anya na olu gị.
KWESR COM KWESPR:: Moutik desktọọpụ nkwụnye kwesịrị ekwesị maka laptọọpụ ọ bụla n'etiti 11- 15.6 ", dị ka Apple Macbook, Mackbook Air, Macbook Pro na ndị ọzọ.
NKỌRG ERGONOMIC: Mbugharị laptọọpụ maka tebụl na-enye gị ohere dị mma maka iji kọmputa ede na ilele iji belata ihe mgbu nke olu na ubu
& AHID AH AL: :lọ ọrụ aluminom siri ike na-enye ezigbo nkwụsi ike na mpempe akwụkwọ silicon mgbochi ga-echebe laptọọpụ gị site na mmebi.
IJU :B CR:: Fdị mpịachi na ịdị arọ (ihe dị ka 25oz) na-eme ka ọ dị mfe itinye laptọọpụ laptọọpụ ahụ n'ime akpa gị ma were ya gaa n'ọfịs, kọfị kọfị yana ebe ọ bụla ịchọrọ ịga. Ọzọkwa tebụl laptọọpụ maka izu ike na akwa ma ọ bụ sofa.
Nọgide na-eche ihu
& SAVE SPACE: Njirimara njikwa USB na azụ nke nguzo a na-enye ohere ịhazi eriri na-acha ọkụ nke ọma na akụkụ mpịachi ya na-enyere aka ịchekwa ohere iji mee ka gburugburu ebe dị mfe ma dị ọcha mgbe anaghị eji ya.
Silicone + Aluminom + alloy
Ngwaọrụ kwesịrị ekwesị
Universal maka ekwentị na 5.8-10 sara mbara
53 * 40 * 29cm ， 24pcs / katọn 14.68kg
3-7 ụbọchị mgbe zuo iji nkwenye
- Biko rụtụ aka na nha. A na-anabata njehie obere obere na ọkwa nkịtị.
- Enwere ike inwe ntakịrị ụcha dị iche iche site na nlebanye anya, igwefoto ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, biko rụtụ aka n’ihe anụ ahụ.
1 x Tablet Desk ekwentị njide